/blog/Masteron Enanthate/Masteron Enanthate Na Longer Na - eme Androgenic Anabolic Steroid (AAS)
Ihe na 04 / 03 / 2019 by Dr. Patrick Young dere na Masteron Enanthate.
Ihe niile banyere Masteron Enanthate
1. Gịnị bụ Masteron Enanthate? 2. Kedu ka Masteron Enanthate si arụ ọrụ?
3. Masteron Enanthate ọkara ndụ 4. Masteron Enanthate mmetụta
5. Masteron Enanthate vs Propionate 6. Masteron Enanthate okirikiri
7. Mmetụta mmetụta Masteron 8. Zụrụ Masteron Enanthate
9. Masteron Enanthate Nyocha 10. Oge nyocha Masteron Enanthate
11. Masteron Enanthate ọgwụ ojiji
Gịnị bụ Masteron Enanthate?
Masteron Enanthate onye aha ya bu Drostanolone Enanthate bu otu n'ime steroid anabolic anabolic (AAS) nke na-ebute ntụpọ mgbe ọ na-abịa n'ịkụnye na ịcha. Ọ bụ ụdị dị iche iche nke Masteron nke e mere na 1950s ma rere ya n'aha aha ahia dị iche iche gụnyere Masteril na Drolban.
Masteron Enanthate bịara mara na 2000s dị ka ọgwụ na dịka mmezi mmemme. Ọchịchọ ya dị elu, ọbụnakwa taa, ọ bụ otu n'ime steroid kachasị na-ejikarị ya eme ihe site na njirimara estrogenic siri ike.
Kedu ka Masteron Enanthate si arụ ọrụ?
Ị nwere ike ịnọ na-eche otú ọgwụ ọjọọ a si arụ ọrụ. Masteron bụ ihe dị na Dihydrotestosterone, na mgbe ị na-eji ya, enwere mmụba na DHT na ahụ.
N'ime ahụ anyị, 5a-reductase enzyme synthesizes DHT na prostate, follicles ntutu, testes, na adrenal glands na-enye ndị ikom-dị ka atụmatụ. Na ụmụ mmadụ, 5% nke ule ahụ ahụ na-emepụta na-agbanwekarị na DHT, nke a pụtara na mmụba na testosterone na-eduba na mmụba na DHT.
DHT anaghị emezi ka ọ bụrụ na ị na-eji Masteron eme ihe, ọ na-eme ka DHT dị n'anụ ahụ na-ebute n'inwekwu na estrogen. N'ihi ya, ọ gaghị esiri gị ike ịnweta mmetụta ọ bụla nke estrogenic n'agbanyeghị ụdị Masteron ị họọrọ ime.
Masteron Enanthate na - arụ ọrụ dị ka onye na - emepụta aromatase na - adịghị mma, ọ bụghịkwa ihe ijuanya na e jiriwo ya mee ihe n'ịgwọ ọrịa kansa. Ọ na-arụ ọrụ site na igbochi Estrogen na ebe ndị na-anabata ihe nke anụ ahụ.
Masteron Enanthate ọkara ndụ
Ị nwere ike ịnọ na-eche oge masteron Enanthate nwere ike ịnọ na usoro gị. Masteron Enanthate ọkara ndụ bụ 8-10 ụbọchị.
Oge nyocha Masteron Enanthate
Oge nchọta maka Masteron Enanthate bụ ọnwa atọ. Ọ pụtara ma ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ iji ya tupu ịme mpi, ị ghaghị ịkwụsị iji ya ọnwa atọ tupu oge a.
Masteron Enanthate ọgwụ ojiji
Kemgbe ọtụtụ afọ, a na-eji Masteron eme ihe maka ọgwụgwọ ọrịa cancer na-enweghị ike igbochi ya. FDA akwadoro Masteron iji mesoo nke a, mana n'ihi ọtụtụ nhọrọ ndị dị taa; ojiji ya adighi adi nma dika o di n'oge ahu.
Masteron Enanthate mmetụta
N'ebe ụfọdụ, Masteron Enanthate nwere ike ịdọrọ dị ka steroid ọhụrụ dị na ahịa, mana eziokwu bụ ndị ji ya mara otú ọ dị mma. Karịsịa, ọ bụrụ na ịba anụ ahụ ọkụ! Ọ bụ ezigbo ihe. Otú ọ dị, nke a apụtaghị na ị ga-aga ida abụba na akwara n'otu oge ahụ. Ị ga-enweta ahụ ike ma ọ bụrụ na ọ bụ ihe mgbaru ọsọ gị. Ndị a bụ ụfọdụ n'ime mmetụta Masteron Enanthate nke onye ọ bụla na-echegharị banyere;
Ị jere ije na ntụrụndụ ma chọpụta na e nwere ndị na-adịghị azụ dị ka ị na-eme ma nwee nnukwu ahụ ike karịa gị? Ihe nzuzo bụ na ọtụtụ n'ime ha na-eji steroid kasị mma iji nweta nke ahụ. Ọ bụrụ na ike gwụ gị na ị bụ onye na-egbu egbu ma were Masteron Enanthate bụ ụzọ ị ga-esi gaa.
Na Mast Enanthate, ị ga-enwe ike ịzụlite ahụ ike ma nweta uka ị na-atụ anya ya. Masteron Enanthate 472-61-1 na-enye gị àgwà kachasị mma kachasị mma. Ihe kpatara ikwu nke a bụ n'ihi na; Idebe mmiri adịghị eme na Masteron Enanthate. Mgbochi gị ga-ejupụta mgbe nile ma sie ike, ị ga-echekwa ọtụtụ ndị na-ekele gị ka ị ga-esi n'aka ndị ezinụlọ gị na ndị enyi gị.
Ọ bụrụ na ị na-atabiga ókè, ị nwere ike ịsị na mirror bụ otu n'ime ihe ndị kachasị njọ ị na-achọghị gafee. Ime ụlọ ahụ na-aghọ otu n'ime ebe ịchọrọ izere. Nke ka njọ bụ na ọ dịghị mgbe ị na-enwe obi ike banyere onwe gị na mgbe ọ bụla mmadụ na-ele gị anya, ihe mbụ i chere bụ na ha na-eleba abụba ndị ahụ.
Ọ bụ ezie na ndị a bụ ụfọdụ n'ime ihe ndị kpatara ya, ị nwere ike ịhapụ ibu arọ, ịwụfu ya na-abaghị uru. Ọ bụghị nanị na ịghara ịdị arọ na-enyere gị aka ka ị dị ukwuu n'àkwà gị, ma ọ na-enyekwa aka ahụike gị n'inweta mma. Ị ga-achọpụta na ọ bụrụ na ị nwere ibu arọ karịa ka i kwesịrị inwe, ihe mgbu na-akpata bụ usoro nke ụbọchị ahụ. E nwere ọbụna ahụike siri ike karị nke na ị ga-etolite dị ka ụdị ọrịa shuga 2.
N'ụzọ dị mma, ịkwanye mgbatị dị elu bụ nzọụkwụ. Masteron Enanthate bụ ụzọ doro anya ma dị irè iji mesoo ibu oke. Ọ bụ isi ihe na-eme ka ị ghara ibubiga ibu ókè ma bụrụ doro anya na ọ bụ otu n'ime ndị na-ahụkarị ọgwụ ndị mmadụ na-aṅụ iyi site n'ịba abụba. Ndị ji ya mee ihe nwere ike ikweta na ọ na-eme ka ọkụ dị mfe. Were ya taa ma mezuo ihe mgbaru ọsọ ahụ ị setịpụrụ. Ọbụna nke ka mma, nweta ahụike ahụike na mgbatị ndụ gị site n'ọtụtụ afọ site na iji Masteron Enanthate.
Ònye na-adịghị achọ ịnwe nnukwu ogwe aka na-egosi site na uwe elu ha? Naanị ị na-agbagharị, ndị mmadụ na-achọ ịkụnye ya iji gosi na ọ dị adị. Nkwanye ùgwù ị na-enweta site na onye ọ bụla bụ ihe ọzọ na-agwa gị na ị na-atụgharị.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmalite, mgbe ahụ elu Drostanolone Enanthate usoro onunu ogwu ga enyere gi aka. Ọzọkwa, ịgbakwunye ya na nchịkọta gị ga-enyere aka belata mmetụta nke estrogenic nke ndị ọzọ nwere ike ịkpata. Ihe Masteron Enanthate bulking nwere ike ọ gaghị abụ ihe dị ukwuu, ma uru ya bụ na ọ na-adịgide adịgide. Masteron Enanthate bulking mmetụta abụghị n'ihi nsị mmiri, kama ọ bụ n'ihi na mmụba nke free testosterone.
Otú ọ dị, usoro nlekọta ahụike gị na nri gị na-edozi ike gị. Gbaa mbọ hụ na usoro mgbatị gị na-aga n'aka na ihe mgbaru ọsọ gị.
Ịchacha bụ ihe nkịtị maka bodybuilders n'ihi na ọ pụtara na ị ga-ele anya toned. Mgbe ịchọrọ ịkpụ, ihe mgbaru ọsọ gị bụ iji belata anụ ahụ mgbe ị ka na-edebe ahụ ike. Mgbe ufodu, ezighi ezi n'ebe ahu, ma ha nwere ike zoo ha. Iji kpughere uru ahụ n'okpuru, ị kwesịrị ịmalite ịmalite imebi ma n'otu oge ahụ jide n'aka na ị gaghị efunahụ ahụ ike nke werela nnukwu mgbalị gị iji wuo. Ya mere mgbe ị na-egbu, ị ghaghị ime ya n'ụzọ ziri ezi.
Mgbe ị belata, ahụ gị na-akawanye mma ma kọwaa ya. Ozugbo a na-adabere gị, obi ga-atọ gị ụtọ site na ịma aka nke Drostanolone Enanthate ga-aghọ. N'ụzọ dị mwute, ọtụtụ ndị na-ahụ ozu na-ebu ozu ha n'ime izu iri na abụọ na izu iri na isii. Mast Enanthate uru ga-ama anya na gburugburu izu isii.
Ka ọ na-erule mgbe ahụ, a na-emezi ọtụtụ anụ ahụ, na Masteron Enanthate (472-61-1) na-enyere aka iwepu abụba siri ike. Masteron Enanthate tupu mgbe ọ bụla, ị ga-achọpụta mgbe ọgbụgba ọnwụ ga-eju gị anya. Ị ga-enwe akwa ụra, ọmarịcha mma ị na-atụ anya mgbe niile.
Masteron Enanthate na Masteron Propionate bụ bothrogenic / anabolic steroid nke dị nnọọ uru na bodybuilding. Ekwela ka aha ha ghọgbuo onwe ha iche n'echiche ha na ha abua bu otu; ha nwere esemokwu.
Masteron Propionate vs. arụ ọrụ dị iche iche dị iche iche. Masteron Propionate bụ onye na-eme ngwa ngwa na-agwọ ọrịa steroid mgbe Masteron Enanthate dị iche. Na Masteron Propionate, ikekwe ị ga-ahụ mgbanwe nke ahụ gị n'ime izu atọ mbụ mgbe gị na Masteron Enanthate, ọ ga-ewe gị karịa izu isii iji hụ mgbanwe.
Masterone Enanthate bụ ogologo ester, nke a pụtara na n'oge ịṅụ ọgwụ, ị ga-agbanye ya ugboro ugboro. N'aka nke ọzọ, Masterone Propionate bụ ester dị mkpirikpi nke a na-agbanyekarị ụbọchị ọ bụla ma ọ bụ kwa ụbọchị. Ndị nwere phobia na-ahọrọ iji Masteron Enanthate. Ngwá agha Masteron Propionate bụkarị 50-150mg / ml ka nke Enanthate bụ 200mg / ml.
The Masteron Propionate vs. Enanthate ọkara ndụ nwere nnukwu nnukwu dị iche. Masteron Enanthate ọkara ndụ bụ ụbọchị iri ka nke Masteron Propionate bụ 2.5 ụbọchị. Ndị ọrụ Masteron Propionate na-ejikọta ya na ndị ọzọ dị ka Testosterone Propionate, Trenbolone Acetate ma ọ bụ NPP (Nandrolone Phenylpropionate). N'aka nke ọzọ, ndị steroid ndị a na-ele anya ogologo oge dịkwuo na Masteron Enanthate. Ha nwere ike ịbụ Deca Durabolin, Trenbolone Enanthate, Testosterone Enanthate ma ọ bụ Cypionate.
Masteron Enanthate rutere elu elu nke ahụ na nwayọọ nwayọọ ma e jiri ya tụnyere Propionate. N'ihi ya, ọ na - ewepụtakwu oge iji kpochapụ ya. Naghachi site na iji ya jiri nwayọọ nwayọọ tụnyere nke Masteron Propionate. Nke a bụ n'ihi na HPTA nke ahụ na-agbake mgbe ọ bụla steroid dị kpam kpam site na usoro gị.
Oge nchọpụta maka Masteron Propionate bụ izu atọ ka nke Enanthate bụ ọnwa atọ. Banyere cycles, ọkpụkpụ Masteron Enanthate na-abụkarị tụnyere nke Masteron Propionate. Ọkpụkpụ Masteron Propionate na-ewe ihe na-erughị izu asatọ ka nke enanthate na-ewe karịa nke ahụ.
Mgbe anyị na-atụle Masteron Prop vs. Enanthate, ọtụtụ ndị na-ahụ maka ozu na-ekwu na ha na-enye otu ihe ahụ mgbe ụfọdụ na-ahọrọ Enanthate n'elu Propionate.
Masteron Enanthate okirikiri
Mgbe ị na-eji Masteron Enanthate, otu usoro nke 400-600 mg kwa izu zuru ezu iji nye gị mmetụta ndị ị chọrọ. A na-ekeji doses abụọ ma gbanye ugboro abụọ kwa izu. Ọ pụtara na nje mbụ gị n'izu ahụ ga-abụ 200-300mg mgbe onye nke abụọ ga-abụ 200-300mg.
Maka onye mbụ, Masteron Enanthate Cycle nwere ike were izu isii na asatọ. Ndị na-akawanye elu nwere oge mgbanaka 6-10 ka ụfọdụ na-aga ruo izu iri na isii.
Na-agbakwunye Masteron iji nwalee uzo na-atụ aro ya n'ihi na Ule ahụ na-enye ego dị oké mkpa nke hormone nke mmepụta ya emetụla. N'ihi ya, ahụ nwere ike ịrụ ọrụ.
Otu onye na-amalite na-enwe usoro Masteron Enanthate nke 400mg na 300-500mg nke Testosterone Enanthate.
Mgbe ị na-eji steroid, a PCT dịkarị mkpa. Ọ na-enyere ahụ aka ịgbake ngwa ngwa. Na anyị ikpe, Masteron Enanthate anaghị aromatize; ya mere ị ga-enwe nsogbu site na estrogenic. Iji Nolvadex ga-ezuru n'oge PCT gị.
Ọ bụrụ na ị na-echekwa Masteron Enanthate tinyere aromatizing ogige dị ike, mgbe ahụ, e nwere mkpa iji nnukwu aromatase inhibitor dị ka Aromasin, Letrozole ma ọ bụ Arimidex. Enweghị ike iji onye na-eme ihe aromatase nwere ike ime ka ị na-ata ahụhụ site na gynecomastia.
Mmetụta mmetụta Masteron
Na-atụ anya na ị ga-ata ahụhụ ma ọ bụrụ na ị na-aṅụ ọgwụ ọ bụla. Ihe dị mkpa bụ oke. Ugboro ugboro, ị nwere ike ịchọrọ ịkwa ahụ ma ejighị n'aka ma ahụike gị ga-enwe nsogbu. Ozi ọma ahụ bụ Masteron Enanthate na-enye gị ohere ịghọrọ mkpụrụ osisi niile n'emebighị ahụ ike gị. Ọ bụ otu n'ime ndị kasị mma steroid n'ihi na mmetụta ndị Masteron adịghị ọtụtụ.
N'ime ndị mmadụ, onye na-agwọ ọrịa a na-agwọ ọrịa anabolic dị nnọọ mfe, ọ gaghị echekwa na ha ga-ata ahụhụ site na ihe ọ bụla Masteron Enanthate kpatara. Maka ụmụ nwanyị, a na-atụ aro Masteron dị ala n'ihi na ọ dị elu nwere ike ime ka ha taa ahụhụ.
Otutu n'ime ihe ndi ozo nke Drostanolone Enanthate bu androgenic. Ha nwere ike ịgụnye ntutu isi na-achọghị, ntutu isi, na otutu. Ndị a Mmetụta mmetụta Masteron agaghị adị njọ, ma ha nwere ike ịbụ na onye ọrụ ahụ nọ na Masteron dị elu. Ndị ikom nwere mkpụrụ ndụ ihe nketa nke ntutu isi na-enwekarị nsogbu site na ntutu isi.
N'ime ụmụ nwanyị, ihe mgbaàmà ndị na-eme ka a ghara ịmalite ịmalite na-enweghi ntutu isi ahụ, nnukwu ọnụọgụ, na olu dị omimi. A gbara ndị nwanyị ume ka ha jiri Drostanolone Enanthate jiri nlezianya mee ihe ma chọpụta mgbe niile ihe mgbaàmà ọ bụla nwere ike igosi. Ụfọdụ nwere ike igosi Masteron Enanthate ihe ndị ọzọ; ya mere, ihe ndị na-akpata Drostanolone Enanthate ga-adịkarị ha mma. Gbanyụọ ojiji ma ọ bụrụ na ị hụla ihe mgbaàmà ọ bụla.
Enwere ike inwe mmụba na cholesterol ọjọọ na mbelata ezi cholesterol. Enweela akụkọ gbasara mgbanwe n'ọbara ọbara, ma nke a anaghị adịkarị.
Enwere ike iwepu mmepụta nke testosterone dị n'ime ahụ. Ọ na-agaghachi na nkịtị mgbe ị na-eji ọgwụ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbatị ọnụego nke ị na-arụpụta na testosterone laghachiri na nkịtị, mgbe ahụ, ị ​​ga-amalite usoro ọgwụgwọ Cycle Post mgbe ị gbasịrị mgbakọ Masteron.
Zụrụ Masteron Enanthate
Fọrọ nke nta ka onye ọ bụla na-arụ ọrụ, onye na-eme egwuregwu ma ọ bụ ihe nlereanya n'oge a na-erepịa Ogwu taa. Ọ nwere ike ịbụ maka ịnweta ahụ ike, belata ma ọ bụ maka ike nweta. Ị jụọla onwe gị ebe ha na-azụ ngwaahịa ha?
Mgbe a bịara n'ịzụ Masteron Enanthate, ị na-azụ ya ma ọ bụ na ụlọ ahịa. N'ụzọ dị mwute, nke a bụ steroid nke anaghị adị mfe inweta. Kama ịga site na ụlọ ahịa iji chekwaa ịchọ ya, ị ga - achọ ịzụta ya n'Ịntanet. N'ụzọ dị otú a, ị ga-ezere iwefu oge na ego ị ga-eji na-eme njem site n'otu ebe ruo ebe.
Ọ bụrụ na ị kpebie ịzụta ya na ntanetị, enwere ọtụtụ ihe ị ga-echebara iji jide n'aka na ego gị anaghị adaba na mmiri ahụ nakwa iji jide n'aka na ịzụta àgwà Drostanolone Enanthate. Na ezigbo ngwaahịa, ị nwere ike inwe obi ike na ị ga-arụpụta ihe kacha mma.
Ihe mbụ ị ga-achọpụta bụ na ọtụtụ saịtị na-ere ire Masteron Enanthate, ma ọ bụghị mmadụ nile ga-ere gị ihe ziri ezi. Ị ga-achọta ụlọ ọrụ na-ahụ maka ịntanetị nke ị tụkwasịrị obi. Inweta otu ga-enye gị udo nke obi ịmara na ị gaghị emenye gị ihere. Ọzọkwa, ị gaghị echegbu onwe gị na ngwaahịa ahụ nwere ike imetụta ahụike gị. Kedu ka ị si mara na saịtị a pụrụ ịdabere na ya?
Gaa maka saịtị na-enye ọtụtụ ozi gbasara onwe ha na ngwaahịa ha. Ọ dị oké mkpa ka ị mara ebe ha nọ, kọntaktị na ngwaahịa ha na-enye iji zere ịbụ ndị a ga-achọta.
Gaa nzaghachi ndị ndị zụrụ ahịa si ụlọ ọrụ ahụ. Nyocha dị mma na-egosi na ị ga-enwe mmesi obi ike na ị na-azụta n'aka ụlọ ọrụ a ma ama.
Zere igbochi rịọ na ịntanetị. Ị maraworị na ọnụ ala dị ọnụ, ị chọghịkwa ịzụta ahụ ike gị maka ego. Ọtụtụ weebụsaịtị ga-enye ngwaahịa ha na ọnụ ala dị ala ka ha wee nwee ike ịdọta ọtụtụ ndị ahịa. Mara mgbe niile na ego ndị na-adọrọ adọrọ bụ ndị na-akụ azụ, ya mere, ị ga-achọ maka ebe nrụọrụ weebụ nke na-enye ego ahịa. Site n'ime nke a, ị ga-ejide n'aka na ị ga - enweta ngwaahịa ndị na - agaghị etinye ahụ ike gị n'ihe ize ndụ.
Masteron Enanthate Nyocha
Ai na-ekwu, "Ọ bụrụ na ị na-enwe nsogbu dị mkpa, ị ghọtara na ọ dị njọ. Ị na-eteta, lee onwe gị, ọ dị ka ị na-etinyekwu arọ kwa ụbọchị. Ọzọkwa, ị maghị ihe ị ga-eme. N'oge a, ị gbalịrị ụdị ngwaahịa ndị a na-achọ ka ị ghara ibu ibu ma mgbe ọnwa ejirila gị, ọ dịghị ebe ị ga-eru nso n'ihe mgbaru ọsọ gị. Ị malitere ịkwụsị, naanị nhọrọ ị nwere bụ ịnakwere onwe gị. Anọ m ebe ahụ ma tụkwasị m obi Masteron Enanthate enyerela m aka ịkwụsị ihe niile dị arọ. M ji ya mee ọnwa atọ na ihe niile m nwere ike ikwu bụ na ọ bara uru. Ruo ugbua, enwere m ihe kariri kilogram iri atọ ma nọrọ ala ma legha anya n'azu njem m; M ga-achọ ka m mara banyere Masteron na mbụ. Ọ bụrụ na ọ dị gị ka ahụ gị dị mkpa maka ịhụnanya ọzọ, mgbe ahụ, nke a bụ ọgwụ kacha mma iji mee ihe.
Nianzu na-ekwu, sị, "Anwalewo m ndị nwere ike ịkpụ ahụ kama nke a yiri ka iti ha niile ihe. Ndị ọzọ niile nyere m nnukwu ahụ ike na-aga n'ime oge dị mkpirikpi n'agbanyeghị ihe m mere iji gbalịa ma nọgide na-elekọta ha. Na-ekwu maka njide mmiri! Mgbe m nyere ha nri, amalitere m ịzụ ahịa maka steroid kacha mma nke ga-enye m uru na-adịgide adịgide. M mesịrị chọta ezigbo ego na AASraw ma zụta Masteron Enanthate. Ngwaahịa a agbanweela m kpamkpam. Ahụ m anọwo na-amụbawanye na nha. Ha siri ike ma kọwaa ya nke ọma, ha anaghị echekwa na ha agaghị apụ ọbụna mgbe ha kwụsịrị iji ya eme ihe. Ekwenyesiri m ike na Masteron Enanthate bụ steroid kasị mma ma ọ bụrụ na ị na-achọ nsonaazụ dị ịtụnanya nke na-agaghị apụ n'anya oge ụfọdụ. "
Fang na-ekwu, sị, "Nke a bụ ọgwụ ọjọọ na-adịghị mma ma a bịa n'ịgbucha ya. Ana m enwe mmasị mgbe nile inwe ahụ dị ukwuu, mgbe m kpebisiri ike inwe mgbapụta ọnwụ, anaghị m ejide n'aka ihe kachasị mma maka m. N'ụzọ dị mma, site na nkwanye ndị enyi m na mgbatị ahụ m biri maka Dronostalone Enanthate. Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na m gafeela, m na-atụgharịkwa anya. Enweghị m ike ichere ịhụ nsonazụ. Ị na-achọ ịgbanwe ndụ gị? Masteron Enanthate. Ọnụ ego ọ bụla bara uru. "
Ah lam na-ekwu, sị, "Anọ m n'izu asaa m ugbu a, m na-atụkwasịkwa obi ma n'otu oge ahụ na-eme ka m nwee ahụ ike nke ga-enyere m aka n'egwuregwu asọmpi m na-esote. Banyere injections, ha adịghị dịka ihe mgbu na ha enwetalarịrị ha. Enweghị m ahụhụ ma ọ bụ mmetụta dị egwu ruo ugbu a. Otú ọ dị, ahụ m agbanweela nke ukwuu. Enwere m nnukwu uru ma ahụ m adaberewokwa. Enwere m obi ike banyere asọmpi ahụ, amakwaara m na m ga-achọta ọtụtụ onyinye maka Masteron Enanthate (472-61-1).
Chenric na-ekwu, sị, "Ike m na ntachi obi m ugbu a mgbe ị jiri steroid a ruo izu ole na ole. Enwere m obere obi abụọ mgbe m nyere ya iwu site na AASraw, mana nwanne m nwanyị gwara m na ha na-ere ngwaahịa. Ezigbo okwu ya, enwere m ihe karịa ihe m chere na m nwere ike. Ihe a na-enyefe! Echere m na naanị mgbanwe m nwere ike ịhụ bụ mgbanwe na ahụ m. Ihe ọzọ karịa akwara m na-emewanye, ike m amụbawokwa nke ukwuu. N'oge a, enwere m ike ịmekwu ihe karịa na mgbatị ahụ. Enweghị m ihe mgbochi, ana m enwe ike ịzụ ọzụzụ kwa ụbọchị. Ana m agbake ngwa ngwa, ugbu a enwere m ike ịrụ ọrụ n'ụtụtụ ma gaa ọrụ ozugbo. Enwetara m ezigbo ọrụ site na AASraw! Na-atụsi obi ike!
Metabolism nke Anabolic-Androgenic Steroid, Victor A. Rogozkin, peeji nke 1-19
The Dictionary of Drugs: Data Chemical, Structures and .., nke J. Elks dezie
Masteron (Drostanolone propionate) Mmetụta, Ụdị, Mmetụta mmetụta Boldenone Undecylenate: 8 Mgbasaozi Mmetụta Ị ga - achọ izere